Medical Writings: Physiology (ဇီဝကမ္မဗေဒ) ခန္ဓာကိုယ်အလုပ်များနှင့် သက်ရှိဖြစ်စဉ်
Physiology (ဇီဝကမ္မဗေဒ) ခန္ဓာကိုယ်အလုပ်များနှင့် သက်ရှိဖြစ်စဉ်
Physiology (ဇီဝကမ္မ = အသက်၏အလုပ်) လူ၏ ဇီဝကမ္မဗေဒ အလုပ်များသည် Systems စနစ်များ၏ ရုပ်ပိုင်း၊ စက်ပိုင်း၊ ဇီဝဓါတုပိုင်း တို့ မည်သို့ ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို လေ့လာသည့် ပညာဖြစ်သည်။ Integration စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် Homeostasis သမမျှတနေစေအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း ၂ မျိုးပါဝင်သည်။
(1) Integration စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း = စနစ်တို့သည် အလုပ်တခုကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် တခုထဲကနေ မဟုတ်ဘဲ၊ တာဝန်ထပ်၍လုပ်နေကြသည်။ တခုနှင့်တခု လျှပ်စစ်ဓါတ်အရဖြစ်စေ၊ ဓါတုသဘောအရဖြစ်စေ၊ ဆက်သွယ်ရေး ရှိနေကြသည်။ Endocrine (အင်ဒိုခရိုင်း) နှင့် Nervous systems (နားဗတ်စ်) စနစ်တို့က အဓိကကျသည်။
(2) Homeostasis (ဟိုမီယိုစတေးဆစ်) = ခန္ဓာကိုယ်က အတွင်းဝန်းကျင်အား တည်ငြိမ်မျှတနေအောင် ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်သည်။ pH အက်စစ်ဓါတ်၊ Temperature အပူချိန်၊ Fluid volume အရည်ထုထယ်၊ Pressure ဖိအား၊ Osmolarity နံရံများကိုဖြတ်၍ စီးဆင်းနိုင်စွမ်းတို့ကို ထိန်းညှိပေးသည်။
ဇီဝကမ္မအလုပ် (၁ဝ) မျိုး
1. Nervous system အာရုံကြောစနစ်၊ (၁) Brain ဦးနှောက် နှင့် Spinal cord ခါးရိုးမကြီးထဲရှိ အာရုံကြောများပါဝင် သည့် ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်၊ (၂) Peripheral nervous system အဖျားပိုင်းရှိ အာရုံကြောများ၊ (၃) Special senses အထူးအာရုံခံများ Vision အမြင်၊ Hearing အကြား၊ Taste အရသာ၊ Smell အနံ့၊ တို့ဖြစ်ကြသည်။ အထိအတွေ့၊ အပူ-အအေး၊ ဖိအားစသည်တို့မှာ ရိုးရိုး အာရုံခံဖြစ်သည်။
2. Musculoskeletal system အရိုးကြွက်သားစနစ်၊ အရိုးစနစ် (Bones အရိုးများ၊ Ligaments အရွတ်များ၊ Cartilage အရိုးနုများ၊ Bone marrow ရိုးတွင်းခြင်ဆီ၊)၊ နှင့် Muscles ကြွက်သားများပါဝင်သည်။ Calcium (ကယ်လ်စီယမ်) နှင့် Phosphate (ဖေါ့စ်ဖိတ်) ဓါတ်ဆားများ အများအပြားရှိသည်။
3. Circulatory System သွေးလှည့်စနစ်၊ Heart နှလုံး၊ Arteries သွေးလွှတ်ကြောများ၊ Veins သွေးပြန်ကြောများ၊ Capillaries သွေးကြောမျှဉ်များ၊ ပါဝင်သည်။ နှလုံးမှ Blood သွေးကို သယ်ပို့ပေးသည်။ အောက်စီဂျင်၊ အာဟာရဓါတ်။ အညစ်အကြေး၊ ခံနိုင်စွမ်း၊ ဟော်မုန်း၊ စသည်တို့အား တနေရာမှ တနေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။
4. Gastrointestinal system အစာလမ်းကြောင်းစနစ်၊ Mouth ပါးစပ်၊ Esophagus အစာမြိုပြွန်၊ Stomach အစာအိမ်၊ Small intestine အူသိမ်၊ Large intestine အူမကြီး၊ Rectum အစာဟောင်းအိမ်၊ Liver အသဲ၊ Spleen ဘေလုံး၊ Pancreas သရက်ရွက်၊ Gall bladder သည်းခြေအိတ်၊ Salivary glands တံတွေးထွက် (ဂလင်း) များပါဝင်သည်။ စားလိုက်သော အစာများကို အသုံးဝင်မည့် (မော်လီကြူး) လေးများ ဖြစ်လာအောင် အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲပေးသည်။ အသုံးမကျတော့သည့် အညစ်အကြေး များအား စွန့်ထုတ်ပေးသည်။
5. Respiratory system အသက်ရှူစနစ်၊ Nose နှာခေါင်း၊ Nasopharynx အာခေါင်၊ Trachea လေပြွန်ကြီး၊ Bronchi လေပြွန်လေးများ နှင့် Lungs အဆုပ် တို့ပါဝင်သည်။ လေထဲမှ အောက်စီဂျင်အား ယူ၍ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် နှင့် ရေကို စွန့်ထုတ်သည်။
6. Urinary system ဆီးလမ်းကြောင်းစနစ်၊ Kidneys ကျောက်ကပ်၊ Ureters ဆီးပြွန်၊ Urinary bladderဆီးအိမ်၊ Urethra ဆီးထုတ်ပြွန် တို့ပါဝင်သည်။ ကိုယ်ထဲမှ ရေ နှင့်အတူ အသုံးမကျသည့် Molecules (မော်လီကြူး) များ၊ Ions (အိုင်းယွန်း) များကိုပါ စွန့်ထုတ်ပေးသည်။
7. Immune system ခုခံအားစနစ်၊ WBC သွေးဖြူဥများ၊ Thymus သိုင်းမတ်စ်-ဂလင်း၊ Lymph nodes လင်ဖ်-နုတ်များ၊ Lymph vessels လင့်ဖ်ကြောများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။ ကိုယ်ထဲသို့ မိမိ (ဆဲလ်)များ၊ မိမိပစ္စည်းများ မဟုတ်သည်ကို ခွဲခြားသိနိုင်သည်။ မဟုတ်သည်များကို ရှင်းထုတ်ရန် Antibodies (အင်တီဘော်ဒီ)၊ အပါအဝင် အခြားဓါတ်တို့ကို ထုတ်ပေးသည်။
8. Endocrine system (အင်ဒိုခရိုင်း) စနစ်၊ Pituitary (ပစ်ကျူထရီ)၊ Thyroid (သိုင်းရွိုက်)၊ Adrenals (အဒြီနယ်လ်)၊ Pancreas (ပန်းခရိယပ်စ်)၊ Parathyroids (ပါရာ-သိုင်းရွိုက်)၊ Gonards (ဂိုးနပ်စ်) တို့မှ ဟော်မုန်း အမျိုးမျိုးထုတ်ပေးသည်။ Gonads (ဂိုးနပ်စ်) များမှာ ယောက်ျားတွင် Testes (တက်စ်တိစ်) မိန်းမတွင် Ovaries (အိုဗရီ) တို့ဖြစ်သည်။
9. Reproductive system မျိုးပွါးစနစ်၊ Gonads (ဂိုးနပ်စ်) များ နှင့် အတွင်း-အပြင် လိင်အင်္ဂါများ ပါဝင်သည်။ မျိုးပွါးနိုင်ရန် Ovum မျိုးဥ၊ Sperm သုတ်ပိုးများ ထုတ်ပေးသည်။
10. Integumentary system (အင်တီဂူမင်ထရီ) ခေါ် ခန္ဓာကိုယ်အား ဖုံးပေးထားသည့်စနစ်၊ Skin အရေပြား၊ Nails ခြေသည်းလက်သည်း၊ Hair အမွှေးများ၊ Sweat glands and Sebaceous glands ချွေး-အဆီထွက်အိတ်များ၊
မှတ်ချက်။ Molecule (မော်လီကြူး) ဆိုသည်မှာ Atom (အက်တွန်) ခေါ် အနုမြူ ၁-၂ လုံး ပါနေသည့် အရာဝတ္တုတခု၏ အသေးဆုံးသော အစိတ်အပိုင်းကို ခေါ်သည်။ (အက်တွန်) ဆိုသည်မှာ မည်သည့် ဓါတ်ပစ္စည်းမဆို၏ ၎င်း၏ ဓါတ်သဘော အပြည့် ရှိသည့် အသေးဆုံးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ (ဟိုက်ဒရိုဂျင်) (အက်တွန်) ၂ လုံးနှင့် (အောက်စီဂျင်) အက်တွန် ၁ လုံးပါလျင် ရေ (မော်လီကြူး) ဖြစ်လာသည်။ အဆီ (မော်လီကြူး) တခုတွင် (ကာဗွန်) နှင့် (ဟိုက်ဒရိုဂျင်) များ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည်။